Sinocare waxay leedahay waayo-aragnimo 19 sano ah oo ku saabsan warshadaha BGM tan iyo aasaaskeedii 2002, waa shirkadda ugu weyn ee wax soosaarka BGM ee Aasiya iyo shirkaddii ugu horreysay ee soo saareysa soo saaraha mitirka gulukooska ee Shiinaha, oo u heellan hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda biosensor, horumarinta, soo-saarka iyo suuq-geynta waxyaabaha lagu baaro cudurka. Sannadkii 2016, ka dib markii si guul leh loo soo iibsaday shirkadda 'Nipro diagnostic Inc.' (oo hadda loo beddelay Trividia Health Inc.) iyo PTS Diagnostics Inc. adduunka.
Iyada oo la siinayo alaabo iyo adeegyo tayo sare leh dadka qaba sonkorowga iyo cudurada kale ee raaga si looga caawiyo inay horumariyaan tayada noloshooda.
Hoggaamiye khabiir ku ah maaraynta sonkorowga ee Shiinaha iyo khabiir ku takhasusay BGM adduunka.
Abaalmarin la siiyay "2020 Shiinaha Abaalmarinta Loo shaqeeyaha Ugu Fiican"
Helay shahaadada diiwaangelinta aaladda caafimaadka iyo oggolaanshaha wax soo saarka ee 2004. Gudubtay ISO: 13485 ee EU TUV waxayna heshay shahaadada CE ee 2007.
Waxaa ku taxan Forbes oo ah mid ka mid ah 200 ee Aasiya 2015 "Shirkad Ka Fiican Hal Bilyan" sanadkii XNUMX oo ahayd xarunta ugu weyn ee wax soo saarka BGMS ee Aasiya.
Lahelay shirkadda lixaad ee mitirka gulukoosta dhiigga. Soo galay xerada ugu weyn ee BGMS adduunka.
Sinocare Lu Valley Biosensor Facility Manufacturing Facility oo ku taal Changsha National High-Tech Development Zone Zone waxaa la bilaabay 2013. Iyadoo kudhowaad 66,000 m2 aag guud ah, warshadeena waxay noqoneysaa saldhiga ugu weyn ee soo saarida Glucose Monitoring System (BGMS) ee Aasiya.
Ganacsigeennu wuxuu ka kooban yahay 135 waddan iyo gobollada adduunka.
In kabadan 63% saamiga OTC iyo 130,000 farmasiyada ee Shiinaha.
Waxyaabaha aan soo saarnay waxaa ka mid ah gulukoosta dhiigga, dufanka dhiigga, ketone dhiigga, glycosylated hemoglobin (HbA1c), uric acid iyo tilmaamayaasha kale ee sonkorowga.
Mid ka mid ah mashaariicda bandhigga ee Barnaamijka Warshadaha Tiknoolajiyadda Tiknoolajiyadda Sare, Sinocare waxay ka heshay taageero maaliyadeed Sanduuqa Wax-soo-saarka Qaranka dhowr jeer, waxayna u gudubtay ISO: 13485 shahaadada nidaamka maaraynta tayada iyo shahaadada CE ee Yurub sanadkii 2007.
KHABIIRKA MAARAYNTA MACLUUMAADKA
15-kii sano ee la soo dhaafay, nidaamkeena saxda ah, la awoodi karo, iyo isticmaalka fudud ee la socodka gulukooska dhiigga ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyeen dhammaan qeybaha macaamiisha ee ku baahsan Shiinaha, in ka badan 50% dadka is-kormeeraya cudurka macaanka oo isticmaalaya alaabada Sinocare. Waxaan si sharaf leh u sheegan karnaa inaan si guul leh wax u baranay oo aan kor u qaadnay is-kormeerka sonkorta dhiigga ee dadka qaba sonkorowga Shiinaha.
Si kastaba ha noqotee, lahaanshaha nidaamka kormeerka gulukooska dhiigga waa tallaabada ugu horreysa oo keliya. Si loo gaaro hadafka ah in si wax ku ool ah loo xakameeyo heerka gulukoosta dhiigga, dadka qaba cudurka macaanka waxay u baahan yihiin inay bartaan sida loo baaro gulukoosta dhiigga, goorta la baarayo, sida joogtada ah ee loo baaro, iyo waxa lagu sameeyo xogta. Ka sokow, sida cuntada iyo jimicsigu u saameeyaan heerka gulukooska dhiigga shaqsiyeed ayaa loo baahan yahay in loo tixgeliyo inay qayb ka tahay isla'eg sidoo kale. Si looga caawiyo dadka qaba sonkorowga inay fahmaan dhamaan dhinacyada muhiimka ah ee maaraynta sonkorowga waxay si buuxda ula jaan qaadayaan hadafkeena, “Laga soo bilaabo Dhiirrigeliyaha Muluqa Dhiigga ee Dhiigga iyo Khabiirka Maareynta Sonkorowga”.
Hadafkani wuxuu dhiirrigelinayaa qof walba oo jooga Sinocare: waxaan gaarsiinay nidaamyada kormeerka gulukooska dhiigga teknoolojiyad aad u horumarsan, waxaan soo saarnay falanqeeyayaal falanqeeyayaal badan si aan u siino macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cudurka macaanka, waxaan soo saarnay maareynta maareynta sonkorowga isbitaalka si loo xiro wareegga u dhexeeya dhakhaatiirta, bukaanka, dhakhaatiirta cuntada , iyo barayaasha sonkorowga. Ugu dambeyntiina, waxaan sameyneynaa nidaam deegaan oo lagu maareeyo sonkorowga waxaanan bixin doonnaa xalka si loo hagaajiyo tayada nolosha dadka qaba cudurka macaanka, si loo fududeeyo isdhexgalka ka dhexeeya bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo bukaannada, iyo in la horumariyo dhaqaalaha daryeelka caafimaadka ee bulshada.
email:[emailka waa la ilaaliyay]re.com